माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरु कोको सँग छन् ओली असन्तुष्ट ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरु कोको सँग छन् ओली असन्तुष्ट ?
माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरु कोको सँग छन् ओली असन्तुष्ट ?
चैत १५ गते, २०७७ - ०९:१३
काठमाडौं । आफ्नो पक्षमा देखिएका पूर्वमाओवादीहरुका कारण केपी शर्मा ओली तथा उनको समूह तनावमा परेको छ । पूर्वमाओवादीबाट गएकाहरूले सम्मानजनक स्थान खोज्न थालेपछि केपी ओली पक्ष रुष्ट बनेको हो ।
“एक त बादललाई केपी कमरेडपछिको नेता मान्नुपर्ने, अर्कोतर्फ त्यही बादलका मान्छेहरू बार्गेनिङ गर्ने ?” केपी ओलीनिकट एक स्थायी समितिले भने, ‘जिल्लादेखि केन्द्रसम्म यसरी भाग खोज्न थालेपछि उनीहरू हामीलाई किन चाहियो ? बस्ने भए हामी मातहत बस्नुपर्यो, भागै खोज्नेभए प्रचण्डकहाँ फर्के हुन्छ ।”
चैत १५ गते, २०७७ - ०९:१३ मा प्रकाशित